Wararka Maanta: Arbaco, Feb 17, 2021-Guddiga Doorashooyinka Itoobiya oo ka hadlay arrimo ku saabsan ONLF
Guddiga ayaa sheegay inay hawada u laaleen warbixin kasoo gaartay garabka uu hoggaamiyo Riyaale Xaamud Guddoomiye ku xigeenkii hore ee ONLF, oo lagu sheegay in xilkii guddoomiyenimo laga qaaday Guddoomiyaha ONLF, C/raxmaan Sheekh Mahdi Maaday, isla markaana si kumeel gaar ah xilkaas usii hayo Riyaale Xaamud.
Sidoo kale Guddiga Doorashooyinka Itoobiya ayaa laalay go'aankii hadda ka hor ay gaareen dhinaca kale ee uu hoggaamiyo Guddoomiye C/raxmaan Sheekh Mahdi, kaas oo lagu sheegay in xubno ururka kamid ahaa qaarna ururkii laga saaray, kuwa kalena shaqo fadhiisin lagu sameeyay muddo 6 bilood ah.
Haddaba Guddiga Doorashooyinka Itoobiya oo dhinacyo badan ka eegay go'aanada ay soo kala saareen labada dhinac ayaa ku tilmaamay kuwo aan loo marin wadadii sharciga, isla markaana ku sheegay go'aanadaas kuwo aan aqbaalaad lahayn.
Balse go'aanka ay kasoo saareen arrinta ONLF Guddiga Doorashooyinka Itoobiya ayaa u muuqda mid dib loogu celinayo xallinta khilaafka ka dhex jiray gudaha ONLF.
Ma jirto wali wax war ah oo kasoo baxay ONLF, oo ku saabsan go'aankii shalay kasoo baxay Guddiga Doorashooyinka Itoobiya.